गर्मी सुरु भयो, यसरी गर्नुस कपालको सुरक्षा…
गर्मी मौसम सुरु भइसकेको छ । यस मौसममा कपाल र छालाको धेरै नै सुरक्षा दिनुपर्छ । गर्मी मौसममा सबैभन्दा बढि कपाल झर्ने गर्दछ । त्यसैले जान्‍नुहोस यस्ता तरिका जसले गर्दा तपार्इको कपाल सुरक्षीत हुन्छ । – हप्ताको एक दिन कपालमा तेल लगाउनुहोस् र जुल्ठो बनाउनुहोस । – हरेक दिन बेलुका
सुमधुर सम्बन्धका लागि पति-पत्नीले जान्नैपर्छ ?
दाम्पत्य सम्बन्धलाई सुमधुर र सुखी राख्नका लागि एकअर्काप्रति दर्बिलो विश्वास, भरोसा, आत्मियता हुनुपर्छ । त्यससँगै एकअर्कालाई केयर पनि गर्नुपर्छ । आफ्ना पार्टनरको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ ? पार्टनरलाई स्वस्थ्य र तन्दुरुस्त राख्न आफुले के गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । पार्टनरको फेमेली हेल्थ फाइल – परिवारमा कसमा कस्तो स्वास्थ्य समस्या
घरेलु वीधीले गायब हुन्छ मृगौलाको पथरी…
मृगौलामा पथरी हुने संभावना धेरैलाई हुन्छ । यस अंगमा स-सना कण बनेर एकअर्कामा जोडिएपछि पथरीको रुप लिन्छ । पथरी मृगौलामा एक वा त्यो भन्दा बढी हुनसक्छ । सामन्यतः यो एकदमै सानो आकारको हुन्छ, जो पिसाबमार्गबाट स्वतः वाहिर निस्कन्छ । तर, यसको अकार ठूलो भयो भने मुत्रमार्गमा रोकावट आउँछ । यसले
मुसामा गरिएको सफल परिक्षण पछि संक्रमित मानिसमा एचआईभीको उपचार सम्भव भएको एक अध्ययनले जनाएको छ । हालै सम्पन्न एक अनुसन्धानपछि अमेरिकी वैज्ञानिकहरुको टोलीले कि्रस्पर जीन-सम्पादन प्रविधिमार्फत विना संक्रमण मानिसको कोषिकाबाट एचआईभीको संक्रमण पुर्णतया हटाउन सकिने निर्क्यौल निकालेको छ । व्याक्टेरियामा पाइने डिएनएलाई सही तरीकाले सम्पादन गर्न सकिने क्रिस्पर क्यास-९ एक